Wararka Maanta: Axad, Oct 3 , 2021-Raysal Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayay oo safar ku aaday magaalada Baraawe
Ra’iisul Wasaaraha ayaa safarkiisu la xiriiraa kormeerka goobaha ay ka dhaceyso doorashada Golaha Shacabka, iyadoo magaalada Baraawe ay kamid tahay magaalooyinka lagu dooran doono qaar kamid ah xildhibaannada aqalka hoose.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Wafdi uu hogaaminayo ayaa raysal wasaaraha kagasii hormaray Baraawe.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa horay u sheegay inuu booqasho ku tagi doono goobaha loo asteeyay doorashada, isagoo horay u booqday Kismaayo iyo Garbahaarey.
Ka hor inta uusan raysal wasaaruhu ka duulin Muqdisho wuxuu kormeeray qeybaha kala duwan ee garoonka Diyaaradaha Caalamiga Aden Cadde isaga u kuur galay sida ay u socdaan howlaha garoonka iyo laanta Socdaalka.
Baraawe, oo ah caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur galbeed, waxay markii ugu horraysay nasiib u yeelan doontaa in lagu qabto doorashada xildhibaannada aqalka hoose ee Koonfurta Galbeed.